ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ၄၀ပြည့် ၄၁နှစ်မြောက်မွေးနေ. ~ pyidawoo
12:55 AM Pyidawoo No comments
... ၁၅-၄-၁၁ အသက် ၄၀ပြည့် မွေးနေ.။ ၄၁နှစ်။ ငယ်ကတည်းက မွေးနေ.ကို မှတ်မှတ်ရရ ရှိလှသည် မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကို ပင့်ပြီး တရားပွဲ ကျင်းပ ဓမ္မဒါနပြုနေကြပါ။ အခု ဆရာတော်ဘုရားလည်း လွန်တော်မူပြီ။ ကိုယ်လည်း ကိုရီးယားမှာ ရောက်နေသည်။ မနှစ်က ၃၉နှစ်ပြည့် မွေးနေ.ရော ဒီနှစ် ၄၀ပြည့် မွေးနေ.ရော ကိုရီးယားမှာ။ ဒီမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာလို မဟုတ်။ ကိုယ့်မွေးနေ.ကို ကိုယ့်ထက် မှတ်မှတ်ရရရှိသူတွေ ပေါ်နေသည်။ 생일 축하 합니다 Happy Birthday to you! က လူတွေထက် လူမဟုတ်တာတွေက ပိုကဲနေပါတယ်။ SK telecom စသည်ပေါ့။
...“It is not living that matters, but living rightly.”( Socrates)
ကျောင်းဒကာ ဇနီးမောင်နှံက ကိုးရီးယားထုံးတမ်းစဉ်လာ မွေးနေ. မီယော့က်ဂု ဟင်းချို ချက်ကပ်ပါသည်။ ဒီမှာ မွေးနေ.တွေ သေနေ.တွေကို တော်တော်လေး အရေးထားကြတာတွေ.ရပါတယ်။ တကယ်တော့ နေနေ.တွေက ပိုအရေးကြီးတာ မဟုတ်ဘူးလားလို. တွေးနေမိတယ်။ မွေးလာပြီးတော့ သေသွားတာ ဘာဆန်းပါသလဲ။ မသေခင် ဘယ်လိုနေသွားလဲ။ ဘာလုပ်ပြီး သေသွားလဲက ပို စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတယ်လို. လက်ခံထားပါတယ်။ မွေးနေ.တွေ သေနေ.တွေကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်နေကြ ပေမယ့် သေသွားတော့ လောကကြီးက လုံးဝမေ့သွားမယ့် နေနေ.တွေ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သားသမီးက တောင် မိဘဆွေမျုိး ညီအကို မောင်နှမတွေကတောင်မှ သိပ် အမှတ်တရမရှိလှတဲ့ နေနေ.တွေနဲ. ဖွဲ.စည်း ထားတဲ့ ဘဝတစ်ခု အတွက် မွေးနေ.ပွဲ သေနေ.လည် နှစ်လည်ပွဲတွေနဲ. ဇာချဲ.နေစရာ လိုပါသေးလား။
ဒီအချိန်အထိ မသေ နေခွင့်ရခဲ့တဲ့ နေနေ.တွေအတွက် မွေးသမိခင်နဲ. အခု ဒီဘုန်းကြီရဲ. အသက်အရွယ် လောက်မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဖခင်၊ ဒီမိဘနှစ်ပါးနဲ. ဆရာများကို အစပြုလို. ကျေးဇူးတင်သင့်တင်ထိုက်တဲ့ ကျေးဇူးရှင် အားလုံးကို အောက်မေ့တသ သတိရခြင်းဖြင့် မွေးနေ.မှာ နေနေ.ပွဲကို တစ်ကိုယ်တည်း ဆင်နွဲချင်ပါသည်။
“သမိုင်းလှလှရေးရအောင်”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ. ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားမှာ တရားတစ်ပုဒ် ဟောခဲ့ဖူးပါ သည်။ သမိုင်းလှလှ ရေးခဲ့ကြတဲ့ လောကသားတို.၏ ကျေးဇူးရှင် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အစပြု၍ သာသနာ့အာဇာနည် ကမ္ဘာ့အာဇာနည် မြန်မာ့အာဇာနည်များကို အားကျစိတ်ဖြင့် မမေ့နိူင်သော စိတ်ထား ဂုဏ်တော်ပွားကာ မွေးနေ.မှာ နေနေ.ပွဲကို တစ်ကိုယ်တည်း ပွားများနေပါသည်။
အသက် ၄၀မှာ ဘဝစတယ်လို. ပြောရိုးရှိပါတယ်။ ၄၀အထိ နေခဲ့တဲ့နေ. နေနေ.တွေထဲက အတွေ. အကြုံနဲ. အသိတရားကြောင့် ဒီကရှေ့လျှောက် အမှားနည်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေတွေ.ရှိသူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာရှိသူတစ်ယောက်၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်သူ တစ်ယောက်ရဲ. ဘဝအစကို ရည်ညွှန်း တယ်လို. နားလည်မိပါတယ်။
လွန်သွားတဲ့အတိတ်နဲ. မရောက်သေးတဲ့ အနာဂါတ်အတွက် အားစိုက်နေတာထက် တကယ်ထိတွေ. ခံစားနေရတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို လက်လွတ်မခံဖို. အရေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ ဖလော်နဲ. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံပတ်ပေး နေနေ.တွေကို မြတ်မြတ်နိူးနိူး တန်ဖိုးထားပြီး ထွေးပိုက်နေမယ်။ မိဘမွေးပေးခဲ့တဲ့သား ဆရာချန်ခဲ့တဲ့ တပည့် တပည့်ပျိူးတဲ့ဆရာ ဆရာဒကာ မေတ္တာရခဲ့သူ မေတ္တာမျှချင်သူ ရင်မှာဖြစ်တဲ့သမီးသား ငါနေနေတဲ့ ငါ့ဘဝ အရှေ.အနောက် တောင်မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာ အရပ်ရှစ်မျက်နှာ အထက်အောက် ဆက်စပ် သမျှ ကြုံသမျှဆုံသမျှ အကြောင်းကင်းတဲ့ အကျုိးမရှိ တန်ဖိုးကို သိသည်။ ငါ့မွေးနေ.မှာ နေနေသည်။
2011년 4월 15일 오후 4시 39분
Posted in: အတွေး (သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဆေး)